Amacala Aphumelelayo - Shanghai Bohua Security Equipment Co., Ltd.
IShanghua Bohua imishini yezokuphepha Co, Ltd. ithole isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO 9001: 2015, i-ISO14001: 2004 uhlelo lokuphathwa kwemvelo, i-OHSAS18001: 2007 uhlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, iShanghai "AAA" ibhizinisi lesikweletu kanye nebhizinisi laseShanghai lobuchwepheshe.
I-washer yamehlo iqinisekiswe yi-American ANSI z358.1-2014, European en60335-12012 + a11: 2014 neChina Classification Society; imaski iqinisekiswe yi-gb2626-2006 kn95 ne-European Union FFP2 ngesikhathi sobhadane; izingubo zokuvikela ezempilo ziqinisekiswe ngu- en 14126: 2003 / AC: 2004.
Imikhiqizo yenkampani ithunyelwe eRussia, e-United States, eJapane, eKazakhstan, eMiddle East, e-Afrika nakwamanye amazwe. Ungumhlinzeki wePetroChina kanye neSinopec, futhi unikezela ngemikhiqizo kumakhasimende ngophethiloli, amakhemikhali, ukudla neziphuzo, okwenziwa ngemithi, ukwakhiwa kwemikhumbi, i-elekthronikhi, amandla elanga nezinye izimboni. Inabalingani abangaphezu kwama-4000, kufaka phakathi amacala wokubambisana wamazwe amakhulu amaShayina nemikhiqizo edume umhlaba wonke njengePetroChina, iSinopec, iCoca Cola, izinto zokugcoba zeShell, iHoneywell, njll.
Le nkampani ine-R & D enomsindo, ukukhiqiza, ukumaketha, uhlelo lokuphathwa kwensizakalo, ngamathalente, ubuchwepheshe, izinsiza, ulwazi nezinye izinzuzo ezivelele, ukukunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephephile futhi enokuncintisana; sizokwenza imizamo engapheli yokukunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephelele nephephile.